Warbixin: Caqabadaha hortaagan ROOBLE - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Iyadoo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Sabtidii ku wareejiyay doorashooyinka iyo amniga Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa durba waxaa soo ifbaxaya caqabado ka dhan ah Rooble.
Caqabada ugu weyn ee heysata Rooble oo durba bilaabay heesaha ayaa ah wareejinta amniga dalka oo aan wali ku jirin gacanta Farmaajo.
Kooxaha Mucaaradka ah iyo Maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa aaminsan in Madaxweyne Farmaajo uu ku wareejiyo amniga dalka, taasi oo aan horseed u noqon doonin kalsooni dhanka amniga ah, maadaama ciidanka ay wali hogaaminayaan taliyayaal isaga ka amar qaata, Rooblena uusan laheyn awood aan ka aheyn magac, sida ay sheegeen xisbiyadaasi.
Maamulka Musharaxa iyo heer federaal ayaa riixaya inay saxiixaan xaalada amaan ee dalka, si ay ula wareegaan masuuliyada booliska milateriga, militariga iyo amniga oo lagu eedeeyay abaabulka weerarada iyo dagaalada ka socda Caasimadda Muqdisho.
Maaddaama ay ciidanka qaranku ku kala qaybsan yihiin diidmada iyo difaaca muddo kordhinta sharci darrada ah, Goluhu wuxuu ku talinayaa in dawladdu ay magacawdo hoggaan mideyn kara ciidanka oo ka dhex dhisi kara kalsooni ay ku mideeyaan ciidanka. Goluhu wuxuu ka digayaa in milatariga oo diiday in waqtiga loo kordhiyo xafiiska ay ka aargoosan doonaan, xuquuqdooda diidi doonaan ama khalkhal gelin doonaan maamulka amniga, si toos ah ama si dadban, madaxweynihii hore iyo xulafadiisa. “Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Ra’iisul Wasaare Rooble inuu qaado tillaabooyin uu ku muujinayo madaxbanaanida dalka iyo inuu kasbado kalsoonida militariga, siyaasiyiinta, shacabka iyo beesha caalamka” ayaa lagu yiri qoraalka.
Dad badan ayaa aaminsan in Farmaajo uusan wali si rasmi ah ugu wareejin xukunka militariga, marka laga reebo hadal ahaan.
“Haddii Fahad, Kulane, Hijaar, Qaroole, Biixi iyo Odowaa ay weli xukumaan Farmaajo, amniga Rooble gacantiisa ku jira muxuu yahay? Yeynaan ku ciyaarin caqligeena,” ayuu yiri hoggaamiye mucaarad ah oo la hadlay Axadle.
“Rooble sidee wax uga qaban karaa amniga doorashooyinka haddii uusan hoostagin taliyayaasha ciidamada qaranka?”
ought to we give extra energy to the navy?